Fampahalalam-baovao Goavana Nangala-Tahaka Ny Tatitry Ny Global Voices. Inona No Vahaolana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Marsa 2015 3:22 GMT
Nanadino nametraka ny anaran'ny mpanoratra sy ny habaka namoaka ny vaovao ny lahatsoratra antserasera momba ny fanadihadiana an-dahatsary notontosain'ny mpanoratra gazety teo aloha tao amin'ny fahitalavi-panjakana Shinoa mikasika ny olan'ny fahalotoana ao amin'ny firenena (Fahombiazana hoan'ny horonantsari-mihetsika mitsikera ny politikan'ny tontolo iainana ao Shina, 2 Martsa, theguardian.com) Miala tsiny hoan'izy ireo.
Nankalaza ny faha-28 taona nahaterahany ny mpanoratra ato amin'ny Global Voices, Owen Guo tamin'ny Alahady lasa teo – ary nanoratra lahatsoratra momba ny fanadihadiana ny olan'ny fandotoana mahatsiravina ao Shina izay efa nivoaka ora maro taloha. Tamin'ny fotoana namoahana ny lahatsoratr'i Owen tao amin'ny Global Voices, dia efa nisy nijery 30 tapitrisa sahady ilay horonantsarimihetsika. Nandritra ny karajia (chat) niarahanay taorian'izany, nilaza tamiko izy hoe : «Tena faly aho satria nankalaza ny tsingeritaona nahaterahako tamin'ny fanaovana zavatra manan-danja tahaka izao” – manome akony ny ezaka nahatonga ny fikambanana Global Voices sy ny fitateram-baovaonay ho velona sy miroborobo nandritra ny 10 taona izany.
Tokony hovakianao ny lahatsoratr'i Owen - tena tsara. Nihevitra tahaka izany ihany koa ny mpanoratra iray ao amin'ny gazety hajaina Guardian, ka nanao dika petaka ny ampahany lehibe tamin'ny lahatsoratr'i Owen ary namoaka izany tamin'ny anarany manokana ny ampitso. Raha nisafidy fehezanteny avy amin'ny lahatsoratr'i Owen ianao ary nikaroka izany ao amin'ny milina fikarohana, mety ny lahatsoratry Guardian no mipoitra amin'ny valiny, izany no vokatry ny fitovitoviana. Andinin-tsoratra mihoatra ny efatra tamin'ny lahatsoratr'i Owen no nadikan'ilay mpanoratra tanteraka, ary tena mitovy ny voalazan'ny lahatsoratra.
Tsy nisy nolazain'ny The Guardian na i Owen na ny Global Voices.
48 ora taorian'ny namoahan'ny the Guardian ny lahatsoratra, nanaitra anay ireo andinin-tsoratra nalain-tahaka. Nifandray avy hatrany tamin'ny mpanoratra sy ny tonian-dahatsoratry ny the Guardian izahay. Nandefa hafatra tamin'ny mailaka ary niala tsiny ilay mpanoratra, tahaka izany ihany koa ilay tonian-dahatsoratra. Ora fohy taty aoriana, nanampy fanazavana fanampiny ilaina izy ireo, namerina imbetsaka ny anaran'i Owen, miampy fanitsiana tany amin'ny faran'ny lahatsoratra. Namoaka fanamarihana ihany koa izy ireo na tao amin'ny tranonkala na tao amin'ny vita printy nahitana ny tsanganana nahitsin-dry zareo.
Saingy toa mbola mahatsiaro voambaka ihany i Owen izay vao avy nanomboka ny asa maha-mpanoratra gazety azy any Shina.
Tsy vitany hoe nangalatra ny zavabitany ny The Guardian, fa mahatsiaro ho voafitaky ny asa izay ananany fanajana tanteraka ihany koa ny zava-nitranga.
Tsy vao sambany akory no nisy fampahalalam-baovao malaza tahaka izao naka tahaka ny lahatsoratry ny Global Voices ao amin'ny habaka ary namoaka izany tahaka ny sangan'asan'izy ireo manokana, ary fantatry ny fikambananay fa mbola tsy hifarana izany. Na dia eo aza ny Zon'ny mpamorona Creative Commons sy ny Politika fanomezan-dalana malalaka, izay mamela ny tsirairay hamoaka maimaimpoana indray ny vontoaty navoakanay.
Manararaotra ny maha-fampahalalam-baovao madinika anay ve ireo mpanoratra gazety maka tahaka ny sanganasanay? Araka ny fanamarihana avy amin'ny mpiara-miasa iray hoe nahoana ilay mpanoratra tao amin'ny Guardian no tsy nandray andinin-tsoratra tao amin'ny lahatsoratry ny New York Times mikasika ny horonantsary fanadihadiana izay nivoaka antserasera fotoana fohy taorian'ny nivoahan'ny lahatsoratr'i Owen?
Mihoatra noho ny fijerena ity sombin-dahatsoratra ity ny fitadiavana izay hamahana izany, satria eo ambany loza mitatao hatrany ny etikan'ny asa fanaovan-gazety, ary tsy ao amin'ny sehatry aterineto ihany izany. Saingy mbola mino izahay fa mendrika anontaniana izany: mihoatra noho ireo dingana fanoherana sy misampotina miharihary, inona no vahaolana eto? Inona no azontsika atao hifikiran'ny orinasa fanaovan-gazety amin'ny soatoavina ambony kokoa?